Bekee Dị Ka Asụsụ Nke Abụọ (ESL) na Mahadum Hodges
Categories: Bekee Dị Ka Asụsụ Nke Abụọ, Apụta
Chọta Pzọ Tozọ Gị Toga nke Ọma na Mmemme ESL anyị!
Ezubere usoro mmemme a iji nye Bekee dị ka asụsụ nke abụọ (ESL) Ntụziaka ka welie nke gi ihe ọmụma, ọzụzụ, na nka oru mgbe bekee bu obughi nwafo gi asụsụ. Ọzọkwa, na akwụkwọ omume nwere ike inwekwu ike gị ekwurịta okwu na Bekee na chụọ ọrụ or mahadum ohere na United States.
Mmemme a gbadoro ụkwụ na ịkwalite ụtọasụsụ, ịgụ, ịde ihe, ịge ntị na Na-ekwu nkà, na nghọta. Na mgbakwunye, mmụta kọmpụta na-enyere gị aka ịmụ asụsụ bekee na sọftụwia gị.
A na-enweta klas niile nke ESL site na usoro ntanetị nke teknụzụ teknụzụ anyị (TEC). Site na TEC nyere aka, ọ ga - ekwe omume ị nweta asambodo bekee gị site na nkasi obi nke ụlọ gị.
Asụsụ Bekee Dị Ka Asụsụ Nke Abụọ (ESL)
Ebee Ka I Nwere Ike Inye ESL?
Hodges na-enye usoro mmụta ESL na ogige Fort Myers site na 8: 30am - 1: 20 pm Monday ruo Tọzdee.
Atọ ọmụmụ izu isii nke isii kwa ọkwa
Tọ asụsụ (ọkwa 1-3)
Ọgụgụ / Ide (Ntọala 1-3)
Ntị / na-ekwu okwu (ọkwa 1-3)
Ihe nnabata maka Mmemme ESL:
Ndị anamachọ ihe gha agha diplọma ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ bụ GED.
Ndị anamachọ ihe ga-enwerịrị onodu iwu iji bie na / ma ọ bụ mụọ na United States maka usoro mmadụ anyị.
Ndị anamachọ ihe ga-enwerịrị opekata mpe afọ 18.
Ndị anamachọ ihe aghaghi imecha Mpempe akwụkwọ tozuru oke nke ESL, nke ejiri ya iji chọpụta ntozu ị debanye aha na mmemme a.
Enyemaka ego dị maka ọkwa 1-3 maka ụmụ akwụkwọ tozuru etozu. Gwa onye Onye nbanye ntinye iji chọpụta ma ị tozuru maka Enyemaka Ego.
* Biko mara, ụmụ akwụkwọ mba ụwa nwere visa F-1 na-agbaso mmemme ESL ga-aga klaasị na klas.
College Prep English Nkọwa
College Nkwadebe English
A na-enyekwa nkuzi Bekee na-akwadoghị ụlọ akwụkwọ kọleji na ọkwa dị elu. Ezubere usoro a iji nye ndị mmụta Bekee dị elu nke na-akwadebe maka kọleji ma ọ bụ mkpa ịbawanye mmụta ha gbasara bekee maka agụmakwụkwọ.
Otu Usoro Nkà Mmụta Nchịkọta 16-izu
Agụ, Ide na Asụsụ (Ọkwa 4)
Ebee ka ị nwere ike ịga kọleji Prep English?
Hodges na-enye nkuzi Preparatory English na kọleji Fort Myers site na 8:30 am - 1:00 pm Monday ruo Tọzdee.
Kpụ ọkụ n'ọnụ English Bridge
Kpụ ọkụ n'ọnụ English Bridge Bridge
Ezubere Intensive English Bridge Bridge maka ndị chọrọ nkuzi asụsụ Bekee ịchụso akara na Mahadum Hodges. Ihe omume a na-enye umu akwukwo ndi asusu ha abughi English kpụ ọkụ n'ọnụ N'ezie bụ Ezubere iji kwadebe gị ịgụ, ide, na ịsụ asụsụ na okwu. Ndị nkuzi ESL na-akụzi ihe omume anyị bụ ndị na-enye ọtụtụ ọrụ nghọta na iji ihe-ọkwa mahadum.
A na-enye ihe ọmụmụ 12-akwụmụgwọ na ọkwa dị elu nke asụsụ Bekee, kpebisiri ike na ịnwale ule nnabata HU. A na-enye usoro izu 16 na ogige Fort Myers na Naples.
Ebee Ka You Pụrụ Takekasị Bekee Kasịnụ?
Mmasị missionbanye Nchọpụta Bekee:
Ndị tinyere akwụkwọ ga-enwerịrị ọnọdụ iwu ibi na / ma ọ bụ ịmụ na United States.
Enyemaka ego dị maka ụmụ akwụkwọ ruru eru.
Kpọtụrụ Admissions maka ozi ndị ọzọ.
Johnny Dorrine, onye ọrụ BB&T na onye gụsịrị akwụkwọ na Hodges ESL na Mmemme Nchịkwa Azụmaahịa
"N'ihi kpụ ọkụ n'ọnụ nke Mmemme Mmemme Bekee na Hodges, enwere m ike ịga n'ihu na klas ESL, Bachelor's in Business Administration, na ịga n'ihu na-arụ ọrụ ego na akụ na BB & T."